Bit By Bit - imifuniselo Running - 4.5.1.3 Yakha imveliso yakho
Ukwakha imveliso yakho liphezulu-umngcipheko, high-umvuzo. Kodwa ke, ukuba ayasebenza, wena onokuzuza umtya yecala elihle eyenza uphando ahlukile.
Ukuthatha indlela yokwakha zovavanyo lwakho inyathelo elinye ngakumbi, abanye abaphandi kuzakha iimveliso zabo. Ezi mveliso ukutsala nxaxheba, baze emva koko babe amaqonga imifuniselo kunye nezinye iintlobo zophando. Ngokomzekelo, iqela labaphandi kwiYunivesithi eMinnesota wadala MovieLens , ebonelela free non-ezorhwebo iingcebiso bhanya, amagama. MovieLens uye wasebenza ukususela ngowe-1997, kwaye ngeli xesha 250,000 abasebenzisi ababhalisiweyo babonelele amanqaku angaphezu kwezigidi ezingama-20 malunga iimovie ngaphezulu kwama-30,000 (Harper and Konstan 2015) . MovieLens uye wasebenzisa uluntu olusebenzayo lwabasebenzisi ukuqhuba uphando emangalisayo ukusuka ukuvavanya iithiyori zenzululwazi yoluntu malunga iminikelo impahla karhulumente (Beenen et al. 2004; Cosley et al. 2005; Chen et al. 2010; Ren et al. 2012) Ukujongana mngeni algorithmic kwiinkqubo neengcebiso (Rashid et al. 2002; Drenner et al. 2006; Harper, Sen, and Frankowski 2007; Ekstrand et al. 2015) ; ukuze kuphononongwe ngokupheleleyo ukubona Harper and Konstan (2015) . Uninzi kwezi mvavanyo kwakungayi kwakungenakwenzeka ngaphandle abaphandi onolawulo ngokupheleleyo imveliso ekusetyenzwa.
Ngelishwa, ukwakha imveliso yakho ibaluleke kakhulu nzima, kwaye kufuneka ucinge ngayo ngathi ngokudala start-up kwinkampani: high-risk, high-umvuzo. Ukuba yimpumelelo, le ndlela inikeza okuninzi kolawulo olubangelwa ukwakha ilinge lakho kunye ngendlela kunye nxaxheba abavela ukusebenza kweenkqubo ezikhoyo. Ngaphezu koko, le ndlela ezinokuba nakho ukwenza ingxelo yecala elihle apho uphando ngaphezulu kukhokelela imveliso engcono leyo ekhokelela abasebenzisi leyo ekhokelela ukuba abaphandi abaninzi njalo njalo (Figure 4.15). Ngamanye amazwi, kanye ingxelo yecala elihle slave, uphando kufuneka kusiba lula. Nangona inako elimiweyo kule ndlela andikwazi, ukufumana nayiphi na eminye imizekelo impumelelo, nto leyo ibonisa nje ukuba kunzima kangakanani na ukuqalisa ngempumelelo. Kodwa, ithemba lam kukuba le ndlela iya kuba luncedo ngakumbi njengoko nobugcisa buphucuka. Ezi nengxaki ekudaleni imveliso yakho kuthetha ukuba abaphandi abafuna ukulawula imveliso kungenzeka ukuba qabane kwinkampani, isihloko ndiza ukumka.
Umboniso 4.15: Ukuba unako ukwakha ngempumelelo imveliso yakho, wena onokuzuza ingxelo yecala elihle: uphando lukhokelele kwimveliso engcono leyo ekhokelela abasebenzisi leyo ikhokelela kuphando ngakumbi. Ezi ndidi ephambuka ingxelo entle zintsonkothe ​​kunzima ukwenza, kodwa ungenza uphando ukuba kunokwenzeka ngenye indlela. MovieLens ngumzekelo iprojekthi yophando eliye kuphumelela ekudaleni ingxelo yecala elihle (Harper and Konstan 2015) .